အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားပေးမည့် Peace Corps စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာ၊ ဆရာမ သုံးဆတိုြး? - Yangon Media Group
အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားပေးမည့် Peace Corps စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆရာ၊ ဆရာမ သုံးဆတိုြး?
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့ရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများတွင် အင်္ဂလိပ်စာသင် ကြားပေးမည့် Peace Corps စေ တနာ့ဝန်ထမ်းဆရာ၊ ဆရာမ ၃၁ ဦးတို့ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ကြောင်း၊ ယခုနှစ်တွင် သုံးဆတိုးမြှင့်လိုက် ကြောင်းသိရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ပိစ်ကောသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရပ်ရွာလူထုများနှင့်အတူနေထိုင် ကာ စေတနာ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် Peace Corps စေတနာ့ဝန်ထမ်းဦးရေအားသုံးဆတိုးမြှင့်လိုက်ပြီး အသစ်ရောက်ရှိလာသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းသစ် ၃၁ ဦးတို့သည် ဧပြီ ၆ ရက်တွင် ကန်တော်ကြီး ဥယျာဉ်ရှိ ကရဝိက်နန်းတော်တွင်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း၊ အဆိုပါစေတနာ့ဝန်ထမ်း များကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ပဲ ခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနှင့် အလယ်တန်းကျောင်းများတွင် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပို့ချခြင်းများ ကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်သံရုံး၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး စကော့မာစီရယ်က”သင်တို့တာ ဝန်ထမ်းဆောင်ရာ နေရာဒေသက ရပ်ရွာလူထုနဲ့သင်တို့အကြားပေါ် ထွန်းလာမယ့်နှောင်ဖွဲ့မှုများဟာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာ အရေးပါတဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ကိုယ်စား ပြုပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုရောက်ရှိလာသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းသစ် ၃၁ ဦးတို့သည် တတိယမြောက်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှလာရောက်ကြခြင်းဖြစ် ကြောင်း ယင်းတို့သည်ရက်သတ္တပတ်ဆယ်ပတ်အကြာ မြန်မာဘာသာစကားမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ သင် ကြားရေးစွမ်းရည်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသင်တန်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သင်တန်းကာလအတွင်းသင်ယူမှုများအတွက် အထောက်အကူဖြစ် စေရန်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိရပ်ရွာများတွင်နေထိုင်ကာမြန်မာမိသားစုများထံမှ သင်ယူလေ့လာခြင်း မြန်မာကျောင်း သားများနှင့်ကျောင်းသင်ခန်းစာ လက်တွေ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
”သင်တို့တာဝန်ကျတဲ့ရပ်ရွာ အတွင်း သင်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင် မှုများကနေတစ်ဆင့် အမေရိကန်- မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအပြန်အလှန် နားလည်မှုများနဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီး မှုများအားကောင်းလာစေရန် အ ကူအညီပေးစေရမှာဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများရဲ့နှလုံးသားတွေပိုပြီး နီးကပ်စေမှာပါ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ တာဝန်ခံမော်ရာဖောလ်တန်က ပြောသည်။ ပိစ်ကောအားအမေရိကန် သမ္မတဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီ မှစတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ် မတ် ၁ ရက်မှစတင်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၄၁ နိုင်ငံတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား နှစ်သိန်းသုံးသောင်းကျော်သည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယင်းအစီအစဉ် အား၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်အ ကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းပေါင်း ၄၅ ဦးအထိရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရာထူးတာဝန် စတင်ထမ်းဆောင်သည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင?
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အားလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲကြရန်နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ပူးတွဲ??
သစ်မာဖြင့်ပြုလုပ်သည့် ဖင်းဂါးဘုတ်နေရာတွင် ထန်းသားဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ဖင်းဂါးဘုတ် အစားထိုးထ?
ဖန်ပင်းပင်း အခွန်တိမ်းရှောင်မှု သတင်းထွက်ပြီးနောက် ရုပ်ရှင်ရိုက်ရန် စီစဉ်ထားမှုများ ဖျက်သိ
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဆက်သွယ်မည့် ကမ်းခြေပတ်လမ်း ဖောက်လုပ်မည်
ပုသိမ်ကြီးမြို့ နယ်တွင် ကျောက်တောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွား၊ အလုပ်သမားသုံးဦး ကျောက်ပိသေဆုံး